Buffon Oo Garoon Isku Dhex Qaawiyey
HomeWararka MaantaBuffon Oo Garoon Isku Dhex Qaawiyey
10/10/2016 Siciid Morgan
Goolhayaha caalamiga ah ee xulka qaranka Talyaaniga ee Gianluigi Buffon ayaa dharkii uu ka ciyaarayey, gaar ahaan nigiska la baxay farxad darteed, markii ay ciyaartu dhamaatay, isagoo la damaashaadaya gool uu daqiiqaddii u dambaysay u dhaliyey Immobile, kulan Axaddii uu waddanka Talyaanigu 3-2 kaga badiyey Macedonia.
Buffon oo 38 jir ah ayaa farxad darteed illoobay xishoodka, waxaana uu garoonka dhexdiisa socod iyo orodba isku daray isagoo aan nigis xidhnayn, taas oo ay taageereyaashu ku sifeeyeen in farxaddu ka tan badatay.
Talyaaniga ayaa gool uu u dhaliyey Andrea Belotti u dhaliyey ku horumaray ciyaarta, laakiin Macedonia ayaa laba daran doori ah ka daba dhalisay, kuwaas oo daqiiqaddii 57aad uu goolka hore u saxeexay Ilija Nestorovski, waxyar kaddibna Ferham Hasani ayaa mid labaad u raaciyey. Talyaaniga ayey markaasi gashay baqasho iyo in ay ku dhow yihiin in laga badiyo, ama ugu yaraan ay barbar dhac galaan.
Laakiin, Talyaaniga ayaa uu shimbir u noqday Ciro Immobile oo goolka barbar dhaca u dhaliyey daqiiqaddii 75aad, goolka guushana raaciyey markay ciyaartu maraysay daqiiqaddii 91aad ee wakhti daayaca.
Farxad ayey markaas la damaashaadeen ciyaartoyga Talyaanigu, taas oo sababtay in Buffon uu dharka la baxo.
Motherwell 0-2 Celtic – Highlights Betfred Cup Final
Ancelotti Oo Shaaciyey In James Iyo Isco Ay Wada Ciyaari Doonaan Iyo Bale Oo Fadhiyi Doona
Full Game Highlights: Philadelphia Phillies vs Los Angeles Dodgers